Al Shabaab oo Hanjabaab ka dhan Dowladda Cusub iyo taageerayaasheeda soo saartay. - Hablaha Media Network
Al Shabaab oo Hanjabaab ka dhan Dowladda Cusub iyo taageerayaasheeda soo saartay.
HMN:- Xarakada Al Shabaab ayaa Hanjabaad ka dhan ah Dowladda Cusub iyo Taageerayaasheeda soo saartay.
Afhayeenka Al Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage ( Cali Dheere ) ayaa hoosta ka xariiqay in Al Shabaab ay la dagaalami doonaan Farmaajo iyo cidda Calanka ka daba sida oo ay ula jeedaan taageerayaashiisa.
Waxaana Madaxweyne Farmaajo ku tilmaameen in isaga iyo Xasan Sheekh ay xaggoda isku mid ka yihiin sidaas daraadeedna ay dagaalkii ay la galeen Dowladdii Xasan Sheekh iyo mid ka daranba la gali doonaan Al Shabaab.
Waxaana uu ka digay Sheekh Cali Dheeri in Waalidiinta Caruurtooda ay ku fiirsadaan iyagoo ka mid noqonaya Ciidanka Dowladda Federaala Soomaaliya.
Hadalka Al Shabaab ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka ay k curatay dowlad Cusub islamarkaana Bulshada Soomaaliyeed ay isha ku wada hayaan waxa ay ku soo biirin doonto Saaxada Soomaaliya.